Amin'ny inona no manao akanjo lava - lava, fohy, tratra, marefo, lazy, mangarahara, tsy misy bokotra?
Miaraka amin'izay tokony hosoloana - sary vetaveta amin'ny sary lamaody amin'ny fotoana rehetra
Ny kardinaly dia heverina ho fitafin'ny vehivavy lamaody, izay manantitrantitra foana ny hakantony sy ny fanatsarana ny endriky ny sary. Ny karazana lamba, ny vahaolana loko sy ny endriky ny hevitra dia manampy ny safidy "ny anao". Na dia izany aza dia zava-dehibe ny tsy fahafahana mifidy fomba fanao tsara, fa koa mba hahafantarana izay tokony hatao.
Amin'ny endriny maoderina, vokatra varimbazaha samihafa sy malaza indrindra avy amin'ny lafika. Io safidy io dia aseho amin'ny famoriana ny vanim-potoana mangatsiaka amin'ny fomba mahazatra sy azo ampiharina, ary koa amin'ny fitafiana amin'ny fahavaratra, amin'ny loko marevaka amin'ny loko matevina. Ny endri-javatra tsy manam-paharoa amin'ny kapa lava be dia be dia afaka manolo ny akanjo ivelany , manao singa fanampiny amin'ny sary na amin'ny endriny amin'ny endriny. Andeha hojerentsika ireo modely maotina ary fantaro ny tokony hatao amin'ny akanjo lava:
Oversize . Ny endriky ny lamaody dia vokatra "tsy avy amin'ny sorokao". Ny fihodinana volumetrika dia hiantehitra foana amin'ny endriny fototra amin'ny sary. Noho izany, modely toy izany dia tokony ho fenoina akanjo akanjo sy akanjo marefo.
Printed design . Fomba iray hafa mampiavaka ny tsirony tany am-piandohana sy ny tongolo tsy mahazatra dia ny safidin'ny sweatshirt kanto amin'ny mody na jacquard. Ity sary ity dia tsaratsara kokoa hanampiana amin'ny antsipirihany amin'ny antsipiriany amin'ny loko malaza na tsy miandany.
Models amin'ny hoditra . Eo amin'ny fironana eo amin'ny modely, feno taim-borona. Amin'ny lamaody, ny endriny voajanahary sy artifisialy. Ny famolavolan'ny felana vavy dia hampifangaroany sy hanjary tsara, ka mety amin'ny toetrany mampihomehy na mampahatahotra.
Amin'ny inona no manao akanjo tsy misy bokotra?
Ny iray amin'ireo vahaolana maoderina amin'ny fomba maoderina dia lasa paompy lava be tsy misy fihenam-bidy. Ny fitafy akanjo amin'ny fiasana dia miteraka ny fiantraikan'ny fahamoram-po, ny fahamendrehana ary ny fahaleovan-tena. Na dia izany aza, ny fanontaniana momba ny fomba fitandroana akanjo vavy tsy misy bokotra dia mijanona ho henjana, satria ilaina ny mifidy tsara ny kiraro sy ny ampahany amin'ny sary, fa koa ny ambony. Ary amin'ity tranga ity, ny singa amin'ny garazy tokana dia ho vahaolana tsara. Ny loko klasika dia tsy mety resy, indrindra raha ny lokony no mamiratra sy mamiratra. Ary manampy ny fahasoavana, fenoy ny akanjo tsara tarehy amin'ny fehikibo.
Ny endriky ny endrika modely sy mody maneho foana dia ny halavan'ny tany. Na izany aza, ny safidy maotina amin'ny karazam-barotra vita amin'ny vy na ny kavia. Ity safidy ity dia manantitrantitra ny tongony matevina ary mifantoka amin'ny kiraro. Ao anatin'ny fanontaniana, izay tokony hikolokoloana, dia ilaina ny misafidy ny fanatontosana ny sary, izay hametraka ny fomba fototra. Ny mpilalao baolina kiraro na kiraro dia hanantitrantitra ny fahaiza-manao sy ny fampiharana azy. Ny halatra sy ny vatosoa dia manantitrantitra ny fanatsarana. Amin'io tranga farany io, azonao atao ny manamboatra akanjo marobe, fehikibo ary kitapo madio.
Amin'ny inona no manao akanjo lava tsy misy akanjo?
Modely tsy manam-paharoa dia safidy manintona sy mahaliana amin'ny akanjo isanandro, ary miaraka amin'ny akanjo tsara tarehy. Ary raha te-hanantitrantitra mivantana amin'ny satroka kanto ianao, dia tsara kokoa ny manao akanjo volomparasy iray na loko iray mifanohitra aminy. Raha liana amin'ny akanjo mainty mainty ianao, dia manala ny fijery manontolo ny stylists. Tena mahavariana, mitovitovy amin'ny karazana pensilihazo na pataloha mahazatra ireto karazana ireto. Ny hafanana ao anatin'ity tsipìka ity dia hanampy fonon-tanana lava sy fehikibo.
Amin'ny inona no manao akanjo marefo?
Ny vokatra vita amin'ny volompokoloka dia nanjary vahaolana tsotra ho an'ny modely amin'ny hoditra. Ity safidy ity dia fandaniam-bola bebe kokoa, saingy ambany ihany koa dia ambany noho ny lamba malaza sy marevaka. Mikasika ny fanontaniana mikasika ny zavatra tokony hikolokolo bozaka dia mamaly amin'ny fomba tsy miangatra ny stylists. Ity akanjo ity dia manondro ny fomba kanto Kazehalnoy. Noho izany, mety amin'ny leggings, jeans amin'ny endrika sy kiraro mahazatra - kiraro , kiraro, kiraro trakta. Ny vokatra malefaka dia azo ampidirina amin'ny tsipika vilana miaraka amin'ny akanjo maivana maivana, manantitrantitra ny fiarahan'ny vehivavy.
Raha mitady fomba tsara tarehy, nalaza ary mahafinaritra ianao, dia mendrika ny hipetraka amin'ny modely amin'ny lace laced. Ny vokatra azo dia aseho amin'ny ankamaroan'ny fanangonana mandritra ny fahavaratra. Ny lambam-pandehan'ny vehivavy dia mameno tsara ny tampon'ny loko, karaoty fohy, kapa amin'ny kiraro na kirany. Ny fitafiana akanjo maitso dia mifanentana amin'ny akanjo maizim-bolo. Ary amin'ity tranga ity, ny akanjom-bolo avo lenta dia mety ho kapa fanampiny na ampahany amin'ny akanjo. Ny endrika Lacy koa dia hita ao amin'ireo fanangonana ny vanim-potoana mangatsiaka avy amin'ny mohair na angora amin'ny labiera.
Ny fanao nentim-paharazana dia fihenam-bidy maharitra. Na izany aza, ny hatsembohana sy ny tany am-boalohany dia manjavona ireo paompy, izay manasongadina ny fomba mahazatra sy tsy mampiavaka. Ny fehiloha vavy fohy dia hameno tsara ny orinasa na ny tsipika birao, izay ataony ho toy ny fitaovana hafa amin'ny jirofo. Modely maoderina sy vita pirinty azo atao amin'ny akanjom-behivavy isan-andro - akanjo fohy, akanjo lava, akanjo maivana. Ireo vahaolana amin'ny vahaolana mahatsikaiky dia afaka manampy ity fitambaran-kiraro miloko mena ity ho an'ny lokon'ny jak'afo.
Ity karazana akanjo ity dia manondro bebe kokoa ny akanjo fanampiny noho ny gardrobe. Ny akanjo lava malefaka vita amin'ny lamba mangarahara dia hameno tsara ny endriky ny hariva na sary iray mahafinaritra amin'ny akanjo. Ny mpanamboatra manao vokatra avy amin'ny sifo tsara indrindra. Ny safidy iray hafa dia matetika ny tulle misokatra miaraka amina tanjona kely misy lacy. Ny Stylists dia mampiasa fitaovana toy izany amin'ny tsipika isanandro. Amin'ny vanin-taona amin'ny fahavaratra, mampiditra modely mangarahara hikolokolo, akanjo fohy sy ambony, hanasongadina ny fahalemem-panahy sy ny maha-vehivavy ny fomba. Ireo akanjo koa dia manan-danja misafidy amin'ny fomba mivelatra sy mazava.
Iray amin'ireo modely tena mahaliana sy tena izy ny foko. Eto ny singa tena mahafinaritra dia ny fananganana. Ny fampifanoheran-kevitra mifandraika amin'ny fatorana asymmetrika sy ny trim-bingo dia hanintona ny saina foana. Nefa amin'ny fotoana iray dia vehivavy tsara tarehy amin'ny foko ara-poko no ho toy ny tsipiriany lehibe amin'ny sary. Ity safidy ity dia tsaratsara kokoa hamenoana akanjo maotina isan-andro - jeans, turtleneck na raglan tokotona, kiraro mahazatra amin'ny hetsika marefo na voditongotra.
Sary nalaina miaraka amin'ny saribakoly
Noho ny fampifangaroana marevaka sy ny hakantony amin'ny endriny, ny akanjo lamaody toy izany dia mora mora foana amin'ny fanandramana amin'ny sary. Aza hadinoina fa amin'ny fomba maoderina dia misy fifangaroana rehetra. Mety ho karazana kely na tsipika mahatsiravina miaraka amin'ny akanjo sy firavaka niavaka. Ary noho izany, ny fanontaniana momba ny fomba fanaovana akanjo matevina dia tsy sakana amin'ny fividianana singa toy ny garderobe, mendrika ny handinika ny toro-hevitra amin'ny stylist:
Romantic bow . Ho an'ny sokajy toy izany, dia mazava sy maotina ary modely loko. Ny fehikibo maharitra sy malalaka dia mibanjina mandrakariva amin'ny akanjo isanandro, kiraro kiraro, kavina lavalava ary kitapom-behivavy - vatana mangatsiaka, kitapo na maingoka.
Amin'ny endrika Kazahal . Mahavariana, mavomavo, marevaka sy mamolavola tsy misy fikandrana tsara tarehy amin'ny kiraro kanto na kiraro amin'ny kofehy. Ary azonao atao ny manome tsipika toy izany amin'ny akanjom-behivavy, ary ny pataloha mahazatra, ny akondro, ny ankamaroan'ny jeans na ny leggings.
Ady mafy . Ny firaisana ara-barotra mifangaro amin'ny akanjo, ny pataloha sy ny akanjom-bovidia ety dia mamirapiratra miaraka amin'ny karazan-damba fohy manjavozavo izay mihazona tsara ny endriny ary lasa fitaovana hafa amin'ny jaketa. Ho an'ny antoko henjana, dia mety tsara ihany koa ny loko fananganana kolontsaina.
Fomba ahoana no hikolokoloana akanjo?
Iray amin'ireo vahaolana be mpitia indrindra hatramin'izao ny fikambanam-piraviravy akanjo amin'ny vehivavy. Ary amin'ity tranga ity, ny safidy amin'ny ampahany ambany amin'ilay sary dia tena samihafa. Ny endriky ny penina ety dia mifanentana amin'ny karazana ambony, lava, fohy, na maivana. Ny akanjo lava lehibe sy marefo , toy ny amin'ny fomba fanaovana akanjo miaraka amin'ny paty, dia mitaky ny fanarahana ny fitsipika momba ny halavany. Amin'ity tranga ity dia tokony hijery ny fehikibo eo ambanin'ny jaketa farafahakeliny dimy santimetatra. Safidy iray ahazoan-danja ahatongavana eto dia ny tampon'ny asymmetrika.
Ahoana ny fomba fitafy amin'ny pataloha amin'ny jeans?
Ny safidy manerantany ho an'ny karazana kiraro tsara tarehy dia ny pataloha mamirapiratra. Ity singa ity dia manantitrantitra ny fanatsarana sy ny fampiharana amin'ny fotoana iray. Miankina amin'ny endriky ny jeans, azonao atao ny mandray anjara mavitrika toy izany, mandeha miaraka amin'ny namana na daty amam-pihetseham-po. Mba tsy hahatonga azy ho diso, dia araho amin'ny fitsipiky ny mifanohitra - ny volombava volon-doko miaraka amin'ny mofomamy matevina, laconic miaraka amin'ny sipa na felana. Ny fanangonana nentim-paharazana amin'ny pataloha jeans dia ahafahanao misintona tampony mamirapiratra sy manonta, ary koa loko marevaka mihodina.
Dresses amin'ny fomba fijerin'i Audrey Hepburn
Ny fomba fiainan'i Barbie
Photoshoot ao amin'ny vala amin'ny fahavaratra
Toetrandro - Trends 2015
Fiaraha-miasa amin'ny lohalika
Ahoana no handravahana dumplings ao anaty saosy?
Hepatic roll miaraka amin'ny famokarana
Inona no hamakiana ny fivoaran'ny tena?
Cranberry amin'ny Bevohoka
Fiakarana amboara miteraka
Ny menaka menaka - ny sakafo tsara indrindra ho an'ny sakafo mahavelona
Whirlpool bain mat
Trano ambolena ao amin'ny trano hazo
Inona no tokony hatao amin'ny vakansy?
Ahoana ny fomba hampiato ny herinandro ho an'ny Pancake?
Ny valindrihana eo amin'ny loggia
Irgi compote - sakafo mahavelona sy mahazatra amin'ny zava-pisotro vitaminina